काठमाडौं । देशकै सवैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना माथिल्लो तामाकोशीले पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन थालेको छ । आयोजनाका ६ वटै टर्बाइनबाट हिजोदेखि उत्पादन शुरु गरिएको हो । तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आगामी बिहिबारदेखि विद्युत खरिद बापतको भुक्तानी दिनेछ । आयोजनाबाट अहिले पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएको र ४ सय ५६ मेगावाट नै बिजुली उत्पादन भइरहेको माथिल्लो आयोजनाले […]
तामाकोशीले दिएका दुई विकल्प : देशभित्रै बिजुली खपत या सस्तोमा निर्यात
२३ असार, काठमाडौं । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत परियोजनाले ७६ मेगावाटबाट परीक्षण सुरु गरेको बिजुली उत्पादन आगामी भदौभित्र ४६५ मेगावाट पुग्नेछ । नेपाली लगानीमा बनेको हालसम्मको देशकै ठूलो माथिल्लो तामाकोशीले नेपाललाई पर्याप्त लाभ दिनेमा सन्देह छैन । तर विद्युत खपत वृद्धि र निर्यातको उचित प्रबन्ध गर्न नसकेमा आयोजना वर्षायामका लागि चुनौती समेत बन्नेछ । तामाकोशी बनेपछि […]
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट सुरुभयो ७६ मेगावाट बिजुली उत्पादन
काठमाडौं, असार २१ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा परिचित माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले आजदेखि बिजुली उत्पादन थालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार भर्चुअल माध्यमबाट आयोजनाको उद्घाटन गर्नुभएको हो । करिब ३ महिनाको निरन्तर परीक्षणपछि आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएको पहिलो युनिट प्रणालीमा जोडिएको हो । आयोजनामा कुल ६ वटा युनिट छन् । ४ […]
–रमेश लम्सालराष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा परिचित माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले सोमबारदेखि बिजुली उत्पादन गर्ने भएको छ । कूल ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको पहिलो युनिटबाट बिजुली उत्पादन गर्न लागेको हो । आयोजनाका प्रवक्ता डा.गणेश न्यौपानेका अनुसार सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अपराह्न ४ बजे श्रव्यदृश्य माध्यमबाट आयोजनाको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । उहाँका अनुसार आयोजनाको पहिलो युनिटको क्षमता ७६ मेगावाट रहेको छ । प्रणालीको मागअनुसार विजुली उत्पादन हुने प
सोमबारदेखि बल्दै माथिल्लो तामाकोशी
काठमाडौं। राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले सोमबारदेखि बिजुली उत्पादन सुरु गर्ने भएको छ। कुल ४५६ मेगावाट क्षमताको परियोजनाले पहिलोपटक युनिटबाट बिजुली उत्पादन गर्ने भएको हो। सो आयोजनाको सोमबार ४ बजे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। आयोजनाको पहिलो युनिटको क्षमता ७६मेगावाट रहेको छ। आयोजनाले शनिबार ढल्केबरदेखि न्यू खिम्ती सवस्टेशनबीचको लाइन चार्ज गरेको थियो।
रासस। बिजुली उत्पादनको मिति सार्वजनिक गरेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको छ। आयोजनाले असार मसान्तमा १५२ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार आज मात्रै सो कम्पनीको कूल आठ लाख दुई हजार ४८७ कित्ता शेयर ६६ करोड ९४ लाख ४८ हजार ९८९ रुपैयाँ मा खरीदबिक्री भएको छ।
माथिल्लो तामाकोशी आयोजना १० वर्षपछि सम्पन्न हुँदै
काठमाडौं : बहुप्रतिक्षित राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले यही असार मसान्तभित्रै १५२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भएको छ। असार मसान्तभित्रै आयोजनाका दुई युनिटबाट बिजुली उत्पादन गर्ने गरी आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको हो। आयोजनाका प्रवक्ता डा. गणेश न्यौपानेका अनुसार पहिलो चरणमा पहिलो युनिटको परीक्षण सम्पन्न भइसकेको छ। यस्तै, हाल दोस्रो युनिटको पनि परीक्षणको काम भइरहेको छ। उक्त युनिटको समेत काम सम्पन्न गर्ने र राष्ट्रिय प्रणालीमा बिजुली जोड्
माथिल्लो तामाकोशीबाट असारभित्रै १५२ मेगावाट बिजुली बल्ने
काठमाडौँ । बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले यही असार मसान्तभित्रै १५२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भएको छ । असार मसान्तभित्रै आयोजनाका दुई युनिटबाट बिजुली उत्पादन गर्ने गरी आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको हो । आयोजनाका प्रवक्ता डा गणेश न्यौपानेका अनुसार पहिलो चरणमा पहिलो युनिटको परीक्षण सम्पन्न भइसकेको छ । यस्तै... The post माथिल्लो तामाकोशीबाट असारभित्रै १५२ मेगावाट बिजुली बल्ने appeared first on Purbeli News.
काठमाडौँ । बहुप्रतिक्षित राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले यही असार मसान्तभित्रै १५२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भएको छ ।असार मसान्तभित्रै आयोजनाका दुई युनिटबाट बिजुली उत्पादन गर्ने गरी आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको हो । आयोजनाका प्रवक्ता डा गणेश न्यौपानेका अनुसार पहिलो चरणमा पहिलो युनिटको परीक्षण सम्पन्न भइसकेको छ ।यस्तै हाल दोस्रो […]